Amazwi okubonga uthisha - esikoleni samabanga aphansi, esikoleni sokuqeqesha izifundo 9 no-11 - kubazali, abafundi
Futhi ekupheleni kweziqu emva kwebanga le-11 noma lesishiyagalolunye, futhi ekupheleni kokugcina iziqu ekupheleni kwesikole samabanga aphansi, abafundi bajabulela injabulo ekhethekile futhi nokudabuka okuncane. Manje bazohlangana nabafundisi abasha nabafundisi, bazofunda isayensi entsha. Ngakho-ke, abafundi bobabili esikoleni esiphakeme, izingane nabazali babo bafuna ukubonisa ukubonga kwabo nguthisha owasekela abafundi bakhe. Ungazibhalela wena noma ukhethe emibonweni ehlongozwayo kanye nezibonelo zemibhalo eyenziwe ngomumo namavesi kanye neprose, ividiyo. Amazwi amahle nokuthinta okubonga ngokuqinisekile ayojabulisa bonke othisha ekilasini labafundi, futhi uthisha wokuqala wezingane.
Amagama amahle okubonga evela kubafundi othisha wesikole samabanga aphansi - izibonelo zamathekisthi
Amantombazane emakilasini asemqoka ngokushesha anamathele othisha, njengoba ebasiza ukuba banqobe ukucindezeleka, bajwayele izimo ezintsha zokufunda. Ngakho-ke, ukuzwa amazwi omusa wokubonga uthisha kubafundi kuyoba mnandi kakhulu. Ngakho uzoqonda ukuthi izingane zimthanda ngempela futhi ziyamthanda.
Izibonelo zamagama amahle okubonga abafundi abafunda esikoleni samabanga aphansi othisha
Inkulumo yokubonga ngabafundi bezigaba eziyinhloko ingabandakanya kokubili izifiso zomuntu siqu kanye nezifiso zokuzilungiselela kakade. Izibonelo ezihlongozwayo zikhulu ngokukhanda okusheshayo. Bangakwazi ukufundiswa ukufunda izingane ezimbalwa ezizokhuluma nothisha. Isigaba sobuholi - Akulula, Futhi, ngezinye izikhathi, kuyingozi - Ngiyabonga kakhulu! Ngomsebenzi nobuntu Yamukele ukubonga, Emva kwakho konke ukuqondisa kwakho Ukuze sithole injabulo enkulu. Siyabonga ngolwazi lwakho, ngokuthembeka nangomusa, Ngokholo, ukuqonda - Sinenhlanhla nawe!
Ithilasi lethu, njengomndeni onobungane, Lapha bonke balinganisela ukusuka ku- "a" kuya ku "I". Futhi lokhu kungukufaneleka kwakho kuphela, lokho esikuhloniphayo. Usinika ithikithi empilweni, Konke lokhu - ngiyabonga! Ungumngane wethu, ungumfundisi wethu, ungumholi we-classy!
Siyabonga ngesikhathi, Siphendule ngesizathu esihle, Ngomqondo, ngokuthembeka nangesineke, Futhi akuzisoli ngokwabo. Siyabonga, ngamazwi aqondile, Siyabonga ngesayensi wena, Ukuze uthole ukufudumala, nokunakekelwa, Ngaphandle kwakho ngeke sikwazi ukubhekana nalokhu!
Amazwi ajwayelekile okubonga evela kubazali kuwo wonke othisha esikoleni esiphakeme
Abazali bavame ukuzwa, ukunikeza ingane esikoleni, ukuthi bazowa uthisha ongenalwazi noma oqinile. Kodwa okuhlangenwe nakho okunjalo cishe kuhlale kungenasici: ngokuvamile eziklasini eziyinhloko nezingane kukhona othisha abanothando nabanakekelayo. Ngakho-ke, ukukhetha amagama okubonga uthisha wamakilasi aphambili kuyadingeka kokubili ukuveza ukubonga komuntu siqu, nokuveza uthando nokuhlonipha egameni lomntanakhe.
Imibhalo ngamazwi okubonga kubazali kubafundisi besikole esiphakeme
Ukukhetha ukuhalalisela othisha kanye nezinkulumo zokubonga kuzo kungaba imibhalo ehlukene. Kodwa kubalulekile ukulalela hhayi kuphela uthisha weklasi, kodwa futhi kumuntu wezenhlalo, isazi sezengqondo, uthisha wezemfundo. Umsebenzi ohlangene walaba bafundisi uvumela izingane ukuba zizizwe zikhululekile esikoleni futhi zibe nesithakazelo ekufundeni. Siyabonga ngomusa wakho, uthando nothando, ukufudumala. Kuzo zonke izinhliziyo zabazali, Sifisela wena injabulo yedolobha. Vumela ukuphila kulethe ukukhanya okuningi, Uthando, ilanga elijabulisayo. Ukumamatheka okuqotho nokukhanya, Futhi imizwa ihlale ihle kakhulu, ihlelekile.
Othandekayo othisha, Kusukela kubazali kuwe "Ngiyabonga", Ngabantwana bakho sibonga, Ngokubekezela, ukubekezela namandla. Ukuze izingane zibhekane Nesidingo sokuba nezinzwa zensimbi, Ngeke sikuqonde umsebenzi wakho, Indlela otholayo ngayo nabo. Sifisela wena amandla kanye nempilo, imibono yokudala nokudinga, Ukwenza abafana bethu, amantombazane Aphenduke abantu bangempela.
Siyabonga ngosizo lwakho, ngemizamo yakho, ngokholo lwakho, ngokuzwela kwakho ezikhathini ezinzima. Ukuze ukunakekelwa kwakho okuyigugu, Ukuze uthole iseluleko professional. Siyabonga ngokuphumelela kwezingane zakho, ukufaneleka kwakho kulokhu akungabazeki. Wenza okunye ngaphandle kokuvimbela, Phela, ulwazi lwakho kubo bonke luyigugu!
Ukuthinta amazwi okubonga uthisha wokuqala - kubafundi nabazali
Kubafundi besikole samabanga aphansi, uthisha wokuqala uba "umhlobo" othembekile futhi othembekile. Usekela abazali bakhe, asekela futhi asize ezimweni ezinzima. Ukulungiselela nokutshela amagama okubonga uthisha wokuqala, omama nabafundi bezingane ngendlela abayifunayo. Phakathi kwezibonelo ezihlongozwayo, ungathola izinketho ezinhle kakhulu zokuveza ukwazisa, inhlonipho nokunakwa.
Ukuthinta ukwazisa nguthisha wokuqala kubafundi
Okuthakazelisayo kakhulu kunoma yimuphi uthisha esikoleni samabanga aphansi kungabhekwa njengokuqashelwa phakathi kwabafundi. Ngakho-ke, izingane ezihamba ezifundeni eziphakathi, ngokuqinisekile zidinga ukubonga uthisha wokuqala ngokunakekelwa, uthando. Kucatshangwa ukuthi amazwi okubonga uthisha kusuka kwengane evesini azokuhambisana ngokuphelele nokufunda okulula. Ufuna ukusho ukuthi "ngiyabonga" Ngomsebenzi wakho onzima nangokwesekwa kwakho, ungumholi ozipholile - Ngamanye amazwi. Futhi-ke, kungaba nzima kithi ngaphandle kwakho, mhlawumbe nokho akunakwenzeka, Ukufunda i-granite yesayensi Futhi ukuxazulula le misebenzi kuyinkimbinkimbi. Ngakho-ke thola ukubonga Ngokuhle, ukubhekakade, Vumela ibhizinisi lilethe injabulo Futhi uphakamise isimo sengqondo!
Ube nathi nsuku zonke, othandekayo, sisizwa. Sasithwala ubuhlungu bezinhliziyo zethu, futhi usisize. Kithina, uhlala njengomzali omuhle, Umqeqeshi wethu, umholi othandekayo. Ngiyabonga namhlanje ngifuna ukukutshela Igama elizwelayo nokubukeka kahle.
Njalo umfundi noma umzali uzothi - Kulula, unenhloko! Ubani ongumngane nokuthi uyini, Sizama ukuqonda, kodwa ungayikhali. Ukubekezela, ukunakekelwa, ngiyabonga, Hlonipha isifiso sakho sokuveza!
Izibonelo zamagama othinta ukubonga kubazali kumfundisi wokuqala
Abazali bayambonga kakhulu uthisha wokuqala wengane. Lo titshala usize ingane yakhe ukuba iqiniseke, iqine futhi ithole ulwazi oluningi oluwusizo. Ukusho amazwi okubonga uthisha wakho wefomu lokuqala kungenzeka evesini naseprose. Kudingekile ukukhetha okukhethwa kukho okukhethwa kukho okufanelekile kunencazelo. Kusukela kubazali bamukela amazwi okubonga, Siyabonga kuwe futhi sikufisela izibusiso eziningi, siyabonga kakhulu, Senzele okuningi kithi, Sifisa wena ukuthi i-Ogonek ayinamanzi eshaweni!
Ukunakekelwa nokufudumala okuqotho kwabafundisi, siyabonga, Injabulo yomuntu siqu, impilo enamandla, Umonde, ufisa ufisa ukufisa! Ukuqhubeka nokunikeza ulwazi lwethu kubantwana bethu, Ukuhlangenwe nakho kokuphila nokuhlakanipha, Ukudlulisela eyabo!
Kusuka ekomndeni lomzali Sithi siyabonga. Kwabantfwana babo bekukuthula Kwakuyisikhathi sonke kithi. Umnsalo ophansi kuwe namuhla, Ukuhlakanipha okuhle. Ezinganeni unayo ngokwanele Enhliziyweni yokuchayeka, ukushisa.
Ngumuphi amazwi okubonga ukukhetha kubazali kubafundisi ukuze baphumelele ebangeni lesi-11?
Ukunakekelwa njalo kwezingane, usizo ekuqeqeshweni kanye nesinqumo semibandela ebalulekile - konke lokhu kungumfundisi wangempela. Abaholi bekilasi bahlobanisa nabafundi abangenalo uthando oluncane kunabamama nabababa ngokwabo. Ngakho-ke, ukuzwa amazwi okubonga uthisha kubazali kuyoba mnandi kakhulu ngosuku lokuphothula. Imibhalo emihle ephakanyisiwe ngezansi ingasetshenziswa ukwenza inkulumo ethintekayo. Kumele kufake amagama okubonga, nezifiso ezinhle kumfundisi.
Izibonelo zamazwi okubonga kusukela kubazali be-11th graders othisha
Amatheksthi okuqala ngamazwi okubonga azosiza bonke abazali abaphothula iziqu ukuba bahloniphe uthisha weklasi, ukwazisa. Usizo ekwenzeni izinkulumo ezinhle izibonelo ezilandelayo zombhalo kanye nevidiyo ekukhulumeni kwabazali enkulumweni: Bathandekayo, bathandekayo othisha bethu! Egameni labo bonke abazali, sifuna ukukuveza ukubonga okungavamile kukho konke okwenzele izingane zethu. Ukuthi ngiyabonga kuwe akusho lutho. Ukuthembela izingane zakho, sasiqiniseka ukuthi bazozithola ezandleni ezithembekile. Futhi asizange siphuthaze. Ngaphandle kokwesekwa kwakho, ngaphandle kokunaka kwakho, ngaphandle kwemizamo yakho, thina-abazali - asikwazanga ukufeza umgomo oyinhloko sonke esaya kuwo futhi siqhubeke sihamba - ngamunye wethu ufuna ukukhula kusuka kwengane yakhe Indoda enezinhlamvu ezinkulu C. Usize futhi uqondise izingane zethu, usisekele lapho singenakukwenza okuthile nabo. Ukhathazekile ngabafundi bakho okungenani, futhi, mhlawumbe, ngisho nangaphezu kwalokho esikwenzayo. Ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi wakho onzima nangamazwi aqotho ngenhliziyo yonke okubonga kakhulu kubo bonke abazali bakho! Siyabonga!
Bathandekayo othisha bethu! Eminyakeni eminingi edlule waqala ukufundisa amadodakazi namadodana ethu ukuba ahlaziye ngokucophelela izinduku nezinkogwe, engeza futhi asuse, afunde izincwadi zabo zokuqala. Futhi lapha phambi kwethu singamadoda namantombazane asebekhulile, amahle, aqinile, futhi okubaluleke kakhulu, ahlakaniphile. Namuhla insimbi yabo yesikole yokugcina izokhala, futhi iminyango eya kubantu abadala izovuleka. Wonke umuntu uyoba neyakho, kodwa ngenxa yemizamo yakho, bonke bazohamba ngokuphila ngenhlonipho. Siyazi ukuthi awuzange ulale ubusuku obuningi behlola izincwadi zabo, awuzange ukhokhele imindeni yakho ngokucophelela, ukuze uchithe ihora elilodwa nezingane zethu, ubanike imfudumalo yezinhliziyo zabo, uchithe izinzwa zabo, ukuze abantu abahloniphekile bakhule kuzo. Namuhla siyabonga ngobuqotho ngakho konke, ngisho nangezinkomba ozibeka ngazo ngezinye izikhathi. Futhi thina, nezingane zethu, ngeke sikhohlwe konke okwenzele khona. Ngiyabonga kakhulu!
Isikole siyisimo esiphelele esinesici esiyingqayizivele - ikhono lokususa into engafanele, ukushiya labo abawazi ukuthanda ngobuqotho nokuzwelana ngokomzwelo, ngokwethembeka babe abangane futhi bazizwe omunye umuntu. Isikole sifana nesiteji, lapho ungahambisa khona phezulu, kuya ezinkanyezini. Uma usuqala isinyathelo sokuqala, kufanele uhambe yonke indlela kusukela ekuqaleni kuya ekupheleni. Kodwa uma lokhu kuphela? Cishe, cha, ngoba umuntu uhloselwe ukufunda konke ukuphila kwakhe - kanye nezingelosi ezigcinayo zesikole, othisha bayabizwa ukusiza kulo msebenzi obalulekile. Ngiyabonga, othisha bezingane, abahlanzekile nabangenalutho abangenakuhlala njalo nokukhuthazela okungenakuqhathaniswa, ngokuba nokholo olunamandla ngamakhono omfundi ngamunye, ngokuhlakanipha okukhulu nokuzimisela ukusiza. Siyabonga ngenhliziyo yakho enomusa, ngokuqonda konke, ngiyabonga ngomsebenzi omkhulu wothisha!
Amazwi amahle okubonga evela kubafundi othisha ukuze bafunde iziqu 11
Iminyaka ende, sidluliselwa ngesandla, yenza isigaba ngasinye umndeni omncane, kodwa osondelene kakhulu. Futhi enhloko yomkhaya onjalo ungumfundisi omuhle weklasi. Lo titshala akafundisi izingane kuphela ukuba zifakwe kahle, zilalelisise, kodwa zibuye zisekele ezikhathini ezinzima. Ngakho-ke, ngaphambi kokuphothula iziqu, abafundi abaningi bacabanga ukuthi yiziphi amazwi okubonga ukutshela uthisha, nokuthi bangabonisa kanjani ukubonga kwabo. Khetha isethulo esidinga amathekisthi amahle, afudumele futhi aqotho.
Imibono yokubonga ukubonga kwabafundi bama-11 amakilasi othisha ekugcineni
Bhala kahle ngiyabonga uthisha ovela kumfundi kulula, udinga nje ukuqonda ukuthi uthweswa iziqu uthini ukutshela uthisha. Ungakwazi nje ukuveza ukubonga, kodwa ungatshela ngothando lwakho, inhlonipho nomusa wakho. Amagama adingekayo angatholakala ezibonelweni zombhalo ezilandelayo: Namuhla sithi "Ngiyabonga!" Siya esikoleni sethu nakothisha, Ngenxa yokuthi sithandwa futhi sifundiswa, Siyabonga kakhulu. Usifundise ukucabanga nokuphupha, Sifundise ubunzima, asesabi ama-rapids. Sifuna ukukufisela okuhle, Uthando, impilo, injabulo nenjabulo.
Ukuthatha izinyathelo zokuqala zokuphila empilweni, ngifuna ukubonga bonke othisha bethu kanye nokuphathwa, umnikelo omkhulu wethu ngamunye. Siyabonga ngokukwazi, ukunakekela, ukusekela ukuvuselela okuphakade. Siyabonga, kodwa bakholwa kithi futhi besiza njalo. Sifuna ngobuqotho ukuzethemba amathemba akho bese ufinyelela lezo zindawo eziphakeme owaziphosayo ngawo wonke amandla akho. Siyabonga kakhulu, futhi sifisa wena konke okuhle, iminyaka!
Siyabonga ngokusifundisa ngokuhlakanipha, ngalokho abantu abasisiza ukuba sibe khona. Futhi makube nzima kakhulu kuwe - Usheshe ukuthumela ulwazi kithi. Ukukhathazeka ngesikhathi sokukhathazeka kwengane Nikeza iseluleko esiwusizo noma uqonde nje. Sifisela wena umgwaqo obalulekile obalulekile, ukuhamba okuhle, ukulala kahle, ukuphumula!
Kusukela ezinkathini ezizayo, abadwebi, abaphathi, abameli, abakhiqizi, odokotela, abahambahambayo, othisha nabantu abalungile, abanomusa, amazwi ethu okubonga afudumele, uzwela, ukubekezela, amaqiniso ajwayelekile, ukutholakala, ukuqonda, izimpendulo zemibuzo, usizo, ukunakwa, injabulo emehlweni, ukugcwaliseka okungapheli kwemisebenzi, indlela. Emva kwakho konke, into ebaluleke kakhulu empilweni ukuba umuntu ofanelekayo, ovulekile. Siyabonga ngokufundisa lokhu.
Amazwi omusa wokubonga kubazali bezingane eziphakeme esikoleni esiphakeme othisha kuze kube sekupheleni kwebanga lesishiyagalolunye
Ukunakekela izingane, ukusiza emfundweni nasekukhuliseni izipho eziyigugu. Futhi kulokhu, abazali kufanele babonge bonke othisha besikole. Umsebenzi wabo ohlangene wasiza ekukhuleni abantwana abancane nabanokuphepha abangabantu abanesibindi. Siyabonga othisha abanomthwalo ovela enhliziyweni kuzosiza amazwi amahle okubonga uthisha nge-prose. Bayawusiza ngokunembile futhi ngobuqotho imizwa yabamama nabababa babafundi.
Izibonelo zamazwi okubonga kubazali bezingane eziphakeme esikoleni esiphakeme ebangeni lesi-9 labafundisi ekugcineni
Amagama afudumele futhi anomusa angabandakanyi ukubonga kuphela, kodwa futhi izifiso ezinhle. Phela, ukusebenza kanzima othisha akuthandi kakhulu. Futhi othisha abahle ngempela, abafuna ukusiza abafundi kuzo zonke izinto, kudingeka bahlonishwe futhi basekelwe. Kusukela kubazali sibonga kubafundisi! Uma nje singakwazi - uDali ngabe ukunike zonke izindondo: Ukuzola nokuqina, Ukukhuthazela kanye nethalenta, Futhi konke okufundisile kubafana eminyakeni edlule. Wabafundisa ukuba bafunde, Musa ukuyeka, ukunqoba, Ngisho noma ku-gants of mittens kwadingeka ngibabambe. Yazi konke ukuthi laba bantu bangathembela izingane! Siyakuhalalisela, bazise, ​​bathande othisha othandekayo!
Le minyaka idlule ingabonakali ... Asikwazanga ukuthi izingane zazikhula kanjani, Sizazi, kodwa azijwayele, Ngeke sizibuze manje: "Sikhona kanjani isikole lapho?" Ibanga elingaziwa lingaphambili, Ukuphothula izifundo - njengomngcele wokuphila omdala. Ngakho ake ngibonise ukwazisa kwami ​​ekhasini elisha ngaphambi kwekhasi elisha!
Bathandekayo, ngikukhothamela kabi! Ihlobo futhi futhi sekuyisikhathi sokubuka futhi. Ngendlela enhle, iklasi lakho lomdabu selivele lifundela iziqu, awukwazi ukuwagcina. Ngokushesha, kuzoba khona amakilasi ekwindla kanye namasha, izinsuku zeSonto zizozulazula futhi, kodwa zingeke zilale kanjani? Ikusasa labafana namantombazane laphuma kanjani? Sifisela wena impilo neminyaka ende, Futhi umholo ohloniphekile, okuningi nangesikhathi! Futhi emsebenzini - ukubekezela, nokuphila - ngaphandle kwenkinga! Futhi njengoba ngaphambi kokufundisa, umgwaqo wakho kuyisifundo!
Amazwi okuqala okubonga abafundi kusukela ebangeni lokugcina lesi-9 labafundisi
Ukuphothula iziqu emva kwebanga lesi-9 kubonakala abafundi ngokuhlukile kancane kunesiqu sokuqeda iziqu emva kwebanga le-11. Kunzima ukuthi intsha ihambe ezindongeni zesikole noma i-gymnasium, kodwa ngesikhathi esifanayo ivulekile ngangokunokwenzeka ukuthola ulwazi olusha. Ukubonga uthisha weklasi ngomsebenzi okwenziwe, usizo kanye nazo zonke izinhlobo zokusekela kuzosiza abafundi basesikoleni esiphakeme babonge uthisha ekuphothuleni.
Imibono nezibonelo zamatheksthi ngokubonga abafundi bebanga lesi-9 labafundisi ekugcineni
Kulezi zibonelo ezihlongozwayo, ungadweba imibono yokubhala umbhalo ngamazwi okubonga. Futhi, kufanele uphinde ufunde ividiyo, ekhombisa ukusebenza kwama-alumni. Othisha wethu othandekayo futhi ohlonishwayo, ngosuku lokuqeda izifundo zethu sibonisa ukubonga kwethu nokubonga okuqotho. Basinika ulwazi oluningi nolwazi olujabulisayo, izikhathi ezimnandi neziqephu ezithakazelisayo. Siyabonga izeluleko nezeluleko ezisizayo. Sifisela ukuthi uqhubeke ngokuqiniseka endleleni yomsebenzi wakho, ukusiza umfundi ngamunye akhethe isiqondiso sakhe empilweni futhi enze izinto ezintsha.
Namuhla usuku olukhethekile kithi - igoli lokugcina lihlelwe. Manje siphinde sisho okuhle esikoleni - Iziqu ziba yisikhathi sethu. Kodwa ngakho-ke ngeke sihambe, Sinezikole eziningi. Siyabonga ngakho konke, Emva kwakho konke, wasikhulisa. Ithimba lonke lesikoleni esihle laba umndeni omkhulu kithi. Futhi kunzima ngathi ukuthi sihambe, Asikwazi ukufihla kuwe. Ngiyabonga, othisha abathandekayo, Ngolwazi lwakho nokubekezela. Izifundo zakho ezihlakaniphile Sikunikeza uthando nenhlonipho!
Siyabonga kuwe, esikoleni, ngesayensi. Ngoba wasinika ulwazi oluningi. Futhi lokhu kuhlukana okubabayo - Emva kwakho konke, isikhathi sesikole saba mnandi kakhulu. Othisha siyabonga ngokubekezela kwakho, ubeke imali kakhulu kithi ngamunye. Ezinhliziyweni zethu, uthando nokuthandwa, Futhi isithombe esicacile yisigaba sethu esijabulisayo.
Sibonga othisha, Siyabonga, Yebo, kuwe. Ngolwazi, labo abamukele kuwe, Ngokuba ukuhlakanipha, ukubekezela okuvela kuwe. Namuhla, zisho ukuthi isikole yisikhathi, Kodwa ngeke sikukhohlwe, Ngokuba izinsuku zesikole izinsuku, izinsuku zesikole, ngiyabonga kusukela umphefumulo ohlanzekile. Amagama amahle futhi othinta, othandekayo namazwe onke okubonga uthisha ngosuku lokuphothula ukutshela abafundi nabazali. Ukubonga akufanele kuboniswe hhayi kuphela kubafundisi beklasi labafundi basezikoleni esiphakeme, kodwa nakumfundisi wokuqala esikoleni samabanga aphansi. Futhi ngo-1, naku-9, naku-11 ekilasini, izingane nezingane zithinteka kakhulu othisha ohlakaniphile nonomusa. Futhi uthisha ngokwakhe kunzima ukutshela abafundi bakhe abathandekayo. Yenza ukuphothula iziqu ungakhohlwa futhi ukhohlwe ukudabuka kuzokusiza amagama okuqala okubonga evesini naseprose. Zingahlanganiswa ngokusebenzisa imibono nezibonelo zevidiyo zezinkulumo.
Izinkondlo zothisha zeholidi ezivela ezinganeni: ezincane, ezinhle nezithintekayo
Ukuhalalisela kakhulu ngosuku lokuzalwa komuntu evesini naselungwini
Siyakuhalalisela ngoSuku lwe-Defender of the Fatherland ngomhlaka-23 Febhuwari ngo-prose nevesi
Amavesi abuhlungu nokuthinta ukushayela kokugcina
Ukuhleleka nokuthinta izinsuku zokuzalwa kwintombazane evesini nase-prose
Izigcawu ezithokozisayo ku-Call Last 2017 ngamakilasi angu-9 no-11
Isifo sobuhlungu obungapheli besisu phakathi kwabesifazane
Ukulala okunamandla nokuphilile kwengane esanda kuzalwa
Indlela yokuthola isifo esesabekayo - uthando
Iholidini eliphathekayo: ukubuyekezwa kwamaqoqo amahhotela-amaqoqo 2016
Isaladi eluhlaza nge-salmon eshisayo
Izimbangela zezinhlungu zesifuba
Izindlela zokwelapha zabantu abahlengikazi ebusweni ebusika
Indlela yokwakha ukwethenjwa emndenini
Imithetho yezocansi zokuqala nomlingani omusha
Yeka ukuthi ungaxabani nomuntu othandekayo wakho?
Ama-capes wabesifazane nama-ponchos
UDima Bilan uqondisa lo msebenzi ... i-paparazzi